रबी दाईलाई खुल्लापत्र : पुडासैनीकी बिधुवी पत्नी सम्झना पुडासैनीलाई पनि भेटी दिनुस है ! » Khulla Sanchar
सर्वप्रथम, १२ दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा रही ढरौटीमा रिहा हुनुभएकोमा म यहाँँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । साथै, तपाईं यथासिग्र पूर्ण रुपमा निर्दोश सावित भएर निसर्त कानुनी दायराबाट मुक्त हुनुहुनेछ भन्ने आशा समेत लिएको छु ।
तालुपोल्ने घाम र छाला डढ्ने तापक्रमका वाबजुद पनि तपाईंको समर्थनका निमित्त हातमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिएका जनसागरको टाउकोमा लाठी बर्सिएको र अश्रु ग्याँस छोडिएको खबर पनि प्राप्त गर्नुनै भयो होला । तपाईंको लागि मर्न र मार्नको लागि तयार रहेको एउटा ठुलो जमातले भेँडा , अन्धभक्त, भरौटे र झोलेहरुको उपमा पाएको यथार्थबाट पनि तपाईं पक्कै अन्जान हुनुहुन्न ।
यि सब घटनाका वाबजुद तपाईं यतिखेर शसर्त, धरौटीमा रिहा त हुनु भएको छ तर तपाईं माथि लागेको “आत्महत्याको लागि दुरुत्शाहन गरेको” आरोपबाट भने मुक्ती मिलेको छैन । यो अवस्थामा म तपाईंलाई यसै पत्र मार्फत केही अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया मेरो अनुरोधलाई आफ्नो एउटा शुभचिन्तकको सुवेक्षाको रुपमा लिनु होला ।
दाई, तपाईंले प्रहरीको कस्टडीमा रहँदा आफु रिहा भएको तीन मिनेटमा सँच्चा दोषी पत्ता लगाउने स्टेटमेण्ट बाहिरिएको थियो । के त्यो स्टेट्मेण्ट तपाईंँकै थियो ? कि तपाईंको नाममा कोही कसैले पोखिदिएको भावनात्मक अभिब्यक्ती ?
त्यसै गरी , कस्टडीमा रहँदा तपाईंँले मृतक सालीकराम पुडासैनिले आत्महत्या गर्नु पुर्व खिचेको भिडियो आफुले नहेरेको भन्ने बयान दिनु भएछ । के यो सत्ते हो या कसैले फैलाएको अफवाह १ मलाई त यो कुरा विश्वाशनै लागेन ।
कुनै पनि केसको जडसम्म पुग्न गहन अध्ययन गर्ने तपाईंको कला, शिप र क्षमताले नै तपाईंलाई अहिलेको यो उचाइमा पुर्‍याएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याई छ । बिषयको जरासम्म पुग्न सक्ने एउटा यस्तो ब्यक्तिले आफु माथिनै लागिरहेको एउटा संगिन आरोपको बारेमा त्यसको सत्य तथ्य नबुझी या त्यस्को बिषयमा चासोनै नदेखाई प्रहरीको पछी लुरुलुरु हिंड्नु भयो होला त १
यदी तपाईंले भने जस्तै सालीकराम जीको भिडियो नहेरिकनै प्रहरीको पछी लागेको हो भने तपाईले सालीकरामको आरोप र मृत्युलाई नै नजर अन्दाज गरेको ठहरिन्छ जुन एउटा जिम्मेवार ब्यक्तीको रुपमा कहलिएको ब्यक्तीले त्यस्तो कार्य गर्दैन। अतस् मलाई तपाईंबाट यो गल्ती हुन्छ भन्ने विश्वाश छैन ।
तपाईंले रिहा भए पस्चात्, फुलका मालाले भरिएको गला अनी अबिरको रङ्गले रङ्गिएको मुहारसहित सर्वप्रथम आफ्नो पक्षमा बोलिदिने र आफ्नो पक्षमा लडीदिनेहरुलाई हार्दिक धन्यवादका शब्द पोख्नु भयो , धेरै राम्रो गर्नु भयो । लाठीको चोट र अश्रुग्याँसको पिरोले घाईते भएकाहरुलाई अस्पातलमै भेट्न जानु भयो त्यो त राम्रो गर्नु भयो ।
अब दाई, एक पटक सालीकराम पुडासैनीकी बिधुवी पत्नी सम्झना पुडासैनीलाई पनि भेटी दिनुसन् है १ उनी पनि यतिखेर पतीको वियोगमा छिन, गहिरो शोकको चोटमा छिन । तपाईंको छोटो भेटले मात्रा पनि उनको पिँडामा मलम लाग्न सक्छ । सम्झनासंगको त्यो भेटमा तपाईंले आफ्नो स्टेटमेनलाई दोहर्‍याउन नबिर्सनु होला ठोकुवाका साथ भन्नु होला ” सम्झना, यदी यो घटनामा म आँफै दोशी ठहरिएछु भने पनि म सँजाय भोग्न तयार छु ।”
हामीले त मनको विश्वाशलाई पोखेका मात्र न हौं । जवसम्म तपाईंलाई अदालतले क्लिन चिट दिंदैन तबसम्म तपाईं संदिघ्न ब्यक्तीकै रुपमा रहनुहुनेछ र मैले पनि अझै तपाईंलाई संदिघ्न ब्यक्तीकै रुपमा हेर्न वाध्य छु । मर्नु अगाडि सालीकराम जि ले तपाईंको नाम रोई-रोई अनी चिच्याइ-चिच्याई बारम्बार लिएका छन् । मर्नु अघी तपाईंलाई ‘पापी’को संज्ञा दिंदै तपाईंको ‘कहिल्यै भलो नहोस्’ भनेर श्राप समेत दिएका छन ।
मृतक सालीकरामका ति शब्दहरु मेरा मन र मस्तिस्कमा नराम्ररी बिझेका छन् । मैले आदर गर्ने एउटा ब्यक्तीप्रती प्रहार भएका ति तिखा शब्दहरुले म मात्रै होइन म जस्ता असंख्य मुटुहरुमा चोट पुर्‍याएको छ । यसो भन्दैमा म सालीकरामले ‘झुटो’ बोले भनेर निचोड निकाल्ने पक्षमा छैन । म त वास्तविकता को पर्खाइमा छु ।
तपाईंसंगै नाम जोडीएका युवराज कँडेलजी र प्रेमिका अस्मिता कार्कीलाई समेत आफ्नो मृत्‍युको कारकको रुपमा आरोप लगाएर सालीकराम ले त यो संसारबाट बिदा लिईहाले तर तपाईं प्रती पनि शंका गर्नु पर्ने केही बिषयहरुको उठान भने गरेर गएकाछन् ।
म जस्ता धेरै मान्छेहरुलाई त्यो भिडियो टेपले ‘सत्य हो या झुटो हो’ भन्ने दोधारमा खडा गरिदिएको भने पक्कैछ । अतस् यो दोधारबाट पार लगाउने कार्यमा तपाईंको पनि अहम भूमिका होस् ।
तपाईंले ‘पर्दाको जन्ती र मर्दाको मलामी’ भने कमाउनु भएको रहेछ भन्ने लागेको छ । अतस् यो नै तपाईंको जिन्दगीको अमुल्य कमाई भनेर ठहरियोस् । तपाईंको यो कमाई कहिल्यै नमासियोस र कहिल्यै नघटोस् । शुभकामना ।
(यो लेखक यज्ञ राज कार्कीको नितान्त व्यक्तिगत विचार हो)